Toriteny – Page 2 – Trinitera Malagasy
Catégorie : Toriteny
27 mars 2020 Njara Pascal
Vakiteny I : Jeremia 11,18-20, Salamo 7,2-3,9bc-10,11-12, Evanjely : Md Joany 7,40-53 Ny tsy fitovian-kevitra be ihany mikasika an’i Jesoa no ambetin-dresaky ny Litorjia mba hampiditra antsika amin’ny misterim-pitiavana (Passio) izay manomboka ny alahady fahadimy. Na amin’izao fotoana izao aza manko dia mboka manohy ny fijaliany ao amin’ireo vavolombelony i Jesoa. Tokony hazava amintsika anefa fa…
Alakamisy IV Karemy
25 mars 2020 Njara Pascal
Vakiteny I : Eksaody 32,7-14, Salamo 106 (105), 19-20,21-22,23, Evanjely : Md Joany 5,31-47, Ambaran’ny vakiteny voalohany fa tezitra tamin’ny vahoakany Andriamanitra ary nolazaina fa tsy Izy fa i Moizy no nitondra azy ireo niakatra avy tany Ejipta. Nampanantena an’i Moizy ho tonga vahoaka lehibe Izy, tahaka ny nataony tamin’i Abrahama (Jen 12,2) fa handringana kosa…
25 martsa: Fankalazana ny nilazana fa naka nofo ny Tompo
Vakiteny I : Izaia 7,10-14.8,10b. Salamo 40,7-8a.8b-9.10.11. Vakiteny II : Hebrio 10,4-10 Evanjely : Md Lioka 1,26-38. Efa hatry ny ela, efa tany amin’ny taonjato IV tany ho any no efa nankalazana ity fety ity, Fetin’ny Tompo, izay noraiketina ny 25 martsa nandritra ny Taonjato VII, rehefa nahazo vahana ny fankalazana ny Noely ny 25 desambra. Saingy…
20 mars 2020 Njara Pascal
Osea 6, 1-6/ Salamo 50/ Md Lioka 18, 9-14 “Tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny sainao manontolo”, hoy i Jesoa (Evanjely omaly Mk 12, 28b-34). I Osea Mpaminany dia efa niantsoantso izany koa: “Mahalalà isika, mikeleza aina hahalala ny Tompo, fa ny fahalalana an’Andriamanitra mihoatra noho ny sorona dorana”. Tsara ny mahatsiaro fa ny olona…
ZOMA III KAREMY
19 mars 2020 Njara Pascal
Osea 14, 2-10/ Salamo 80/ Md Marka 12, 28b-34 Mialoha ny hitrangan’ny toe-javatra ambaran’ny Evanjely anio dia efa telo andro izao i Jesoa no tao Jerosalema. Fa ny fiakarany ka nandroahany ny mpivarotra tao an-tempoly (Mk 11,15-18) no fihetsika nandrava tanteraka ny fifandraisany tamin’ireo mpitondra fivavahana izay efa nitady ny fomba rehetra hamonoana Azy….